AHOANA NY FOMBA FAMPANDEHANANA NY JAR FILES AMIN'NY WINDOWS 10 - MALEMY
Ahoana ny fomba fampandehanana ny JAR Files amin'ny Windows 10
Ny rakitra jar dia fohy ho an'ny a J ava amin'ny chive rakitra ary mitazona programa java (rakitra Java, metadata, ary loharano) ao anatiny. Amin'ny maha-endrika rakitra fonosana azy (mitovy amin'ny endrika fisie .zip), ny rakitra jar dia azo ampiasaina ihany koa hanangonana rakitra maro hafa hanatsarana ny fivezivezena sy hampihenana ny habetsaky ny habetsak'ireo rakitra ireo. Izany dia mahatonga ny fisie jar ho be mpampiasa indrindra ary azo ampiasaina hitahiry lalao, fampiharana, fanitarana browser sns.
Tsy ny rakitra siny rehetra no foronina mitovy. Ny sasany dia natao hohazakazaka / hovitaina toa ny rakitra .exe ary ny hafa nalaina / nongotahaka toa ny rakitra .zip . Na dia mora aza ny mamaha ny rakitra siny, ary afaka atao toy izany koa ny fomba hamoahana ny atin'ny rakitra zip, dia tsy toy izany koa ny fanatanterahana rakitra jar.
Fikirakirana .exe rehefa tsindrio indroa mandefa programa / fampiharana miaraka amin'ny fanampian'ny Windows OS. Toy izany koa, rakitra .jar dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fandefasana azy amin'ny alàlan'ny Java Framework. Na izany aza, mpampiasa maro no miatrika lesoka rehefa manandrana manatanteraka rakitra jar ary anio, amin'ity lahatsoratra ity, hanazava ny momba an'io izahay ary hampahafantatra ny fomba fitantanana na fanatanterahana ireo rakitra jar ao amin'ny Windows 10.
Fa maninona no tsy mandeha ny rakitra jar?
Fomba 1: fampiasana 'Misokatra amin'ny…'
Fomba 2: Mihazakazaha rakitra JAR amin'ny alàlan'ny Command Prompt
Fomba 3: Mampiasa ny fampiharana an'ny antoko fahatelo
Fomba 4: esory ny fisie Jar
Amboary tsy afaka manokatra fisie JAR amin'ny Windows 10
Vahaolana 1: Fanavaozana ny tonian'ny rezistra
Vahaolana 2: Ovao ny fanovana ny fiarovana ny Java
Ny fisie Jar dia misy fisehoan-javatra izay milaza amin'ny fomba ahoana ny fomba fitondran-tena rehefa mitazona fampahalalana momba ireo fisie hafa nofonosina ao anaty rakitra jar. Ary koa, ny fisie jar dia misy rakitra an-dakilasy mitazona ny kaody java ho an'ny programa azo tanterahina. Ireo rakitra roa ireo miaraka amin'ireo rakitra haino aman-jery hafa dia ahafahana mampandeha rakitra jar ho fangatahana tokana avy amin'ny Java Runtime Environment.
Ireo mpampiasa dia sendra ny iray amin'ireo hadisoana roa ireo rehefa manandrana mihazakazaka rakitra jar.
Ny tontolo iainana Java Run-Time dia tsy napetraka araka ny tokony ho izy mba hampandehanana rakitra .jar
Tsy miantso ny Windows Registry JRE (Tontolo iainana maharitra Java) araka ny tokony ho
Ny lesoka voalohany dia mipoitra rehefa mihazakazaka kinova java efa antitra amin'ny solosainy ny mpampiasa ary ny faharoa kosa dia rehefa tsy mifandray tsara amin'ny mimari-droa Java ny rakitra jar.
Indraindray koa, rehefa misy mpampiasa tsindry indroa ao anaty rakitra jar, misy varavarankely command prompt mandingana segondra ary avy eo manidy azy hiverina ka mamela ny mpampiasa ho kivy izy. Soa ihany fa mora ny famahana ireo lesoka roa ireo sy ny fampandehanana fisie jar.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ianao dia mitaky ny Tontolo iainana Runtime Java hitantana ny rindranasa / kaody voarakitra ao anaty rakitra jar. Mba hijerena izay kinova Java mandeha amin'ny solo-sainanao sy ny fomba fanavaozana ny kinova farany, araho ireto dingana voalaza etsy ambany ireto:
1. Mandrosoa ny Command Prompt ho Administrator amin'ny alàlan'ny fomba rehetra voalaza etsy ambany.
a. Tsindrio ny bokotra Windows + X na tsindrio havanana amin'ny bokotra fanombohana hanokafana ny menan'ny mpampiasa herinaratra. Avy amin'ny menio manaraka, kitiho ny Command Prompt (Admin).
b. Tsindrio ny bokotra Windows + R hanombohana ny baikon'ny Run, soraty ny cmd ary kitiho ny ctrl + shift + hiditra.
Tsy namaly intsony ny mpamily amd display
d. Tsindrio ny bokotra fanombohana (na tsindrio ny bokotra Windows + S), kitiho haingana ny baiko ary safidio ny Run as Administrator amin'ny tontonana ankavanana.
2. Raha vantany vao misokatra ny varavarankely maika, baiko java -version ary tsindrio enter.
Ny command prompt dia hanome anao ny kinova Java napetrakao amin'ny rafitrao.
Raha tsy izany, tadiavo ny configure java fampiharana amin'ny PC-nao ary tsindrio About ao amin'ny kiheba ankapobeny haka ny kinova Java.
3. Ny kinova farany an'ny Java dia ny Version 8 Update 251 (hatramin'ny 14 aprily 2020). Raha tsy mampiasa ny kinova farany ianao na tsy manana Java mihitsy, mankanesa any amin'ny pejy fisintomana ofisialy Java Downloads ho an'ny rafitra miasa rehetra ary tsindrio ny Manaiky ary manomboka misintona maimaim-poana bokotra
4. Tadiavo ny fisie alaina (This PC> Downloads) ary kitiho indroa ny fisie .exe hanokafana ny wizard setup. Araho izao ny bitsika eo amin'ny efijery hametrahana ny kinova Java farany.
5. Avereno jerena amin'ny dingana 1 sy 2 ny fijerena raha tafita soa aman-tsara ny fanavaozana.
Raha sendra olana ianao amin'ny fanavaozana ny Java, andramo esory tanteraka ilay kinova taloha tamin'ny fampiasana ny Fitaovana fanesorana Java ofisialy ary avy eo manao fametrahana vaovao.
Amin'ny fomba voalohany dia manokatra ny rakitra jar miaraka amin'ny Java Runtime Environment izahay. Araho ny dingana eto ambany raha hanao toy izany koa ianao.
1. Sokafy ny mpikaroka rakitra ( Kitendry Windows + E. ), tadiavo ny rakitra jar izay tianao ampiharina / sokafana ary kitiho eo ankavanana.
2. Avy amin'ireto safidy fisehoan-javatra ireto / menio manodidina, safidio Misokatra miaraka amin'ny.
3. Mandehana mamaky ny lisitry ny rindranasa ary manandrana mitady Java (TM) Platform SE binary . Azo inoana fa tsy ho hitanao ao amin'ny lisitry ny rindranasa izany.
4. Ka, kitiho eo Misafidiana fampiharana hafa .
5. Avereno jerena indray ny lisitra ary raha tsy hitanao ny tsindrio ny fampiharana Fampiharana bebe kokoa> Mitadiava fampiharana hafa amin'ity PC ity mba hahitanao an-tanana ny fampiharana
6. Ankehitriny, mizaha amin'ny làlana izay itehirizana ny java.exe. Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tokony C: Program Files Java jre1.8.0_221 bin fa raha tsy hitanao eo izy dia andramo ny hidina ity lalana manaraka C ity: Program Files (x86) Java jre1.8.0_221 bin
7. Farany, safidio java.exe ary tsindrio enter.
Ny iray koa dia afaka mihazakazaka rakitra siny amin'ny alàlan'ny fikandrana fitakiana baiko Windows 10. Ny fizotrany dia misy fanatanterahana tsipika komandy tokana ary mora tanterahina.
1. Mandrosoa ny Command Prompt amin'ny maha Administrator anao mampiasa ny iray amin'ireo fomba voalaza tetsy aloha.
2. Raha vantany vao nanomboka ny fikandrana haingana ny baiko dia alefaso ny baiko 'Cd ' hiverina any an-tampon'ny lahatahiry.
3. Ankehitriny, soraty ity baiko manaraka ity java -jar sample.jar ary tsindrio ny bokotra enter.
Aza adino ny manova ny 'sample.jar' amin'ny tsipika baiko miaraka amin'ny anaran'ny fisie .jar.
Raha tsy izany, azonao atao ny mandingana ny dingana faharoa ary manolo ny sample.jar miaraka amin'ilay lalan'ny fisie jar.
Vakio ihany koa: Fix Java dia natomboka fa niverina ny kaody 1 fivoahana
Tahaka ny amin'ny zavatra hafa rehetra, misy fisie antoko fahatelo marobe izay mamela anao hihazakazaka na hanao rakitra jar ao amin'ny Windows 10. Iray amin'ireo programa mpampihatra jar malaza malaza eto amin'ny Internet ny Jarx.
Mandehana mankamin'ny tranonkala ofisialy Jarx - Ilay mpampihatra JAR ary sintomy ny fisie lozisialy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny ‘Jarx-1.2-installer.exe’. Tadiavo ny fisie alaina ary apetraho Jarx. Ny rindrambaiko dia tsy manana GUI afa-tsy ny fikandrana momba ny fikandrana. Ankehitriny, tsindrio indroa fotsiny ilay rakitra jar na tsindrio havanana ary safidio ny fisokafana handefasana ireo rakitra jar ao amin'ny solo-sainanao manokana.
Fampiharana antoko fahatelo iray hafa izay hanampy anao amin'ny fampandehanana rakitra tahiry dia Jarfix . Araho ny fomba fiasa izay noresahina momba ny fampandehanan'i Jarx ireo rakitra jar.
Fanamarihana: I Jarfix dia tsy afaka mihazakazaka fisie raha tsy natomboka ho mpitantana.
Araka ny voalaza tetsy aloha, tsy ny rakitra jar rehetra no natao / natao ho rakitra azo tanterahina. Ny sasany miasa fotsiny toy ny fonosana ary mitazona karazana rakitra hafa ao aminy. Azontsika atao ny manamarina raha toa ka azo tanterahina ny fisie jar raha tsy amin'ny alàlan'ny famongorana / famongorana azy fotsiny.
Raha efa niasa tamina rakitra zip sy rakitra rar ianao dia efa fantatrao ny fomba hamoahana rakitra. Afaka misafidy ny hampiasa ilay fitaovana fitrandrahana builtin amin'ny varavarankely na haka fanampiana amin'ny iray amin'ireo rakitra maro mamoaka rindranasa hita amin'ny internet. Ny sasany amin'ireo rindrambaiko fampiasa sy atokisana indrindra dia 7-zip ary WinRAR .
Mba hitrandrahana rakitra mampiasa fitaovana fanonganana ao anaty Windows, tsorina tsindrio havanana amin'ny fisie jar ary safidio ny iray amin'ireo ‘Hanala…’ safidy.
Mba hamoahana rakitra iray amin'ny alàlan'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, alohan'ny alàlan'ny tranokalan'ny fampiharana ary alao ny rakitra apetrakao. Vantany vao vita ny fametrahana ny rindranasa, sokafy ny fisie jar ao amin'ilay rindrambaiko hahitanao ny atiny tazominy.
Raha tsy vitanao ny mihazakazaka ny fisie jar raha mampiasa ny iray amin'ireo fomba etsy ambony ireo dia andramo ny hamakivakiana ireto vahaolana manaraka ireto.
1. Mandrosoa File Explorer ( Windows Key + E. ) ary mivezivezy mankany amin'ny folder bin ao anatin'ny folder fametrahana java.
Ny toerana fampidirana dia miovaova arakaraka ny fizarazaran'ny kapila nametrahanao azy. Na izany aza, ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa, ny folder dia hita ao amin'ny C drive ary ao anaty Program Files na Program Files (x86).
2. Ao anatin'ny fampirimana bin, mahita java.exe, tsindrio havanana eo dia safidio Properties .
Windows 10 very fifandraisana internet
3. Avadika amin'ny mifanentana takelaka ary apetaho eo akaikiny ilay boaty Ataovy toy ny Administrator ity programa ity . Tsindrio ny Apply arahin'i Ok raha hivoaka.
Efatra. Mandrosoa ny Command Prompt ho mpitantana amin'ny iray amin'ireo fomba voalaza teo aloha.
5. Miankina amin'ny zavatra takiana aminao, ampidiro ny iray amin'ireto baiko manaraka ireto ao amin'ny fikandrana avy hatrany ary atsindrio ny enter
Windows 10 kaody hadisoana 0x80073cf9
Aza adino ny manolo ny C: Program Files (x86) amin'ny adiresy fampirimana Java anao.
Mba handefasana fotsiny ny fisie jar, kitiho ireto baiko manaraka ireto ary kitiho ny Enter:
ftype jarfileterm=cmd /s /k C:Program Files(x86)Javajre1.8.0_221injava.exe -jar %1″ %*   assoc .jar=jarfileterm
6. Raha te-debug ny rakitra jar ianao dia mila ny fikandrana haingana avy hatrany mba hisokatra hatrany aorian'ny fandefasana ilay rakitra, soraty ity baiko manaraka ity
Mandrosoa ary manandrama manokatra ny fisie jar.
Raha mbola tsy vitanao ny manatanteraka ilay rakitra jar, dia mila manova zavatra vitsivitsy ao amin'ny Windows Registry Editor izahay. Manoro hevitra anao izahay mba hitandrina tsara amin'ny fanarahana ity torolalana etsy ambany ity satria fitaovana mahery ny Editor Registra ary tsy tokony hafangaro.
1. Mandrosoa ny Windows Registry Editor amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fanombohana, fikarohana ny mpamoaka ny rezistra ary tsindrio ny fidirana na amin'ny fanoratana regedit amin'ny baikon'ny hazakazaka (Windows Key + R).
2. Avy amin'ny tontonana ankavia, kitiho ny zana-tsipìka na tsindrio indroa HKEY_CLASSES_ROOT hanitatra ny mitovy.
3. Avy amin'ny lisitra mitete-midina, tadiavo ny lahatahiry jarfile (Mety hahita ny lahatahiry ny mpampiasa sasany jar_auto_file SY jarfileterm fa tsy jarfile. Araho ny fomba fiasa izay voalaza etsy ambany)
4. Voasary manokatra jarfile voalohany amin'ny fipihana indroa eo amboniny.
5. Mizotra mankany jarfile> shell> open> baiko
5. Eo amin'ny tontonana ankavanan'ny, ianao dia tokony hahita lakile misy soratra hoe Default. Tsindrio havanana ary safidio Manova na tsindrio indroa eo fotsiny hanovana ny lakile.
6. Ao anatin'ity boaty pop up manaraka ity, eo ambanin'ny mari-pamantarana Value Data, apetaho ny fftype baiko niditra teo aloha teo amin'ny varavarankely baikon'ny baiko.
7. Zahao ny fizahana raha azo antoka fa marina izany ary tsindrio ok .
Fanamarihana: Aza adino ny manaraka ny fomba feno amin'ny alàlan'ny lahatahiry roa, jar_auto_file & jarfileterm, raha manana azy ianao)
8. Farany, akatona ny tonian-dahatsoratry ny rezistra ary manandrama mandefa ilay rakitra jar.
Ny olana iray mahazatra an'i Java dia ny risika fiarovana. Misy hafatra fampitandremana milaza loza fa matetika no mipoitra rehefa manandrana mihazakazaka rakitra jar. Mba hamahana izany dia mila manova tsotra ny sehatry ny fiarovana isika.
1. Tsindrio ny bokotra fanombohana na tsindrio Windows Key + S, karohy Ampifanaraho Java ary tsindrio ny enter hanokatra.
2. Miova amin'ny ARO kiheba amin'ny fipihana eo ihany.
3. Alao antoka fa eo akaikiny ilay boaty ‘Enable Java content for browser and Web Start applications’ dia voakitika.
4. Apetraho ny haavon'ny fiarovana an'ireo fisoratra tsy ao amin'ny lisitry ny Exception Site mankany Avo ary tsindrio eo AMPIHARO .
5. Tsindrio eo ok hivoaka.
Ahoana ny fomba hanafoanana ny Adobe AcroTray.exe amin'ny fanombohana
Ahoana ny fomba hanovana anarana ny rakitra marobe amin'ny Bulk amin'ny Windows 10
Manantena izahay fa afaka nihazakazaka na nanantanteraka ny fisie jaranao tamin'ny Windows 10 araka izay kasaina hatao. Raha sendra misy olana manaraka ity torolàlana etsy ambony ity na amin'ny fanokafana rakitra fisie dia ampifandraiso aminay ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany ary hanampy anao izahay.
facebook dating tsy miseho
tsy afaka manova ny famirapiratan'ny windows 10
mpamily wudfrd tsy nahavita nampiditra
jiro amin'ny alina tsy mandeha amin'ny windows 10
fitendry windows 10 tsy mandeha aorian'ny fanavaozana